Dowlada Madaxweyne Farmaajo oo Guulo waa weyn iyo Horumaro kala duwan ka gaartay Arrimo badan (Akhriso) – Dadweynaha Press – Isha wararka sugan
HomeWararkaDowlada Madaxweyne Farmaajo oo Guulo waa weyn iyo Horumaro kala duwan ka gaartay Arrimo badan (Akhriso)
Dowlada Madaxweyne Farmaajo oo Guulo waa weyn iyo Horumaro kala duwan ka gaartay Arrimo badan (Akhriso)
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya aya ku taaabsaneysay usbuucyadii lasoo dhaafay Hormaro kala duwan kuwaas oo ay ku garab siinayaan Dhinacyada kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed.
Dowladda ayaa usbuucaan Shirar muhiim ah waxa ay ku qabatay Magaalada Muqdisho gaar ahaane shirkii amniga qaranka oo wajigiisa labaad uu usbuucani ka dhacay Magaalada Muqdisho iyadoo wajigiisii koowaadne uu bishii may ee sanakan kadhacay Magaalada London.
Waxaa shirkaas amniga qaranka oo qodobo muhiim ah ay ka soo baxeen kasokow feer socday heshiisyo kale oo ay dowladda Federaalka ah lagashay bulshada caalamka gaar ahaane Mareykanka iyo Dowladda Qatar.
Dowladda Mareykanka ayaa heshiis maalgashi oo madax banan lasaxiixatay Dowladda Soomaaliya iyada oo malaayiin dollar oo gaareysa ilaa 300 oo milyan oo dollar ay sheegeen in ay dalka soomaaliya ku maal gashanayaan.
Dhinaca kale dowladda Qatar aya sanduuqeeda hormarinta waxa uu Magaalada Muqdisho heshiis kula saxiixday Dowladda Soomaaliya, heshiisyadaas oo dhigaya in maalgashi balaaran lagu sameeyo dalka, aduun lacageed oo gaaraya ilaa 200 oo milyan oo dollar ayaana ku baxaya maal galintaasi.
Sidoo kale ilo xogogaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in Dowladaha Sucuudiga iyo imaaraatkane ay ka dhabeynayaan balanqaadyo ay sameeyeen kuwaas oo ay la galeen Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo caasimadaha dalalkaas booqasho ku tagay.
Si kastaba waxaa muuqaneysa in dowladda ay ku talaabsaneyso hormarro kala duwan oo ay la galeyso bulshada caalamka oo aaminay hogaanka dalka kuwaas oo hadda un ku baraarugay in ay muhim tahay in ay soomaaliya maalgashadaan.